Etu esi etinye WordPress na Pantheon | Martech Zone
Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ otu n'ime akụ azụmaahịa gị kachasị baa uru. Oge oke, nnweta, na arụmọrụ nwere ike imetụta akara ala gị. Ọ bụrụ na saịtị gị amaliteworị na WordPress-congrats! —Nke ị na-aga nke ọma iji nyefee ahụmịhe na-enweghị ntụpọ maka ndị ọrụ gị na ndị otu gị.
Mgbe ị na-ahọrọ CMS ziri ezi bụ ihe mbụ dị mkpa iji wuo ahụmịhe dijitalụ dị egwu. Họrọ onye ọbịa kwesịrị ekwesị maka CMS ahụ nwere ike ịkwalite arụmọrụ, melite oge, belata oge mmepe, ma nye nkwado dị mkpa.
Uru WordPress na Pantheon
Pantheon na-bụ ejikwa Bochum Bochum ikpo okwu na-enye ọsọ na arụmọrụ ị chọrọ iji gbanwee ndị ọrụ n'ime ndu. N'adịghị ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-eweta Bochum WordPress na-eji sava ma ọ bụ igwe arụmọrụ, Pantheon na-agba ọsọ na akụrụngwa. Containers nwere ọtụtụ elele, gụnyere ịnye ngwa ngwa, nnweta dị elu, ịdị mma dị mma, na ịrụ ọrụ ka mma.
Na mgbakwunye na ịbelata akụrụngwa, saịtị Pantheon nwere PHP 7 na ndabara, jikwaa n'efu HTTPS, ihu akwụkwọ zuru ezu, na a Global CDN—I nwere ike ime ihe kariri nke igbe. Ọ bụghị banyere anyị arụ ọrụ kacha mma na mmepe n'anya.
Nchikota nke ikpo okwu siri ike na ihe ndi ozo maka ndi okike weputara Pantheon site na mpi. A na-echekwa ikpo okwu iji na-agba ọsọ na saịtị WordPress na ọkwa dị iche iche.
Ibido WordPress na Pantheon
Pantheon si ịnye ọnụahịa ụdị-enye gị ohere mepụta saịtị sandbox n'efu - ị na-ewere atụmatụ naanị wee bido kwụọ ụgwọ mgbe ị gbakwunye ngalaba omenala gị ma dịrị ndụ. Mepụta saịtị WordPress dị mfe, họrọ WordPress mgbe ị na-emepụta saịtị ọhụrụ.
N'aka nke ọzọ ị nwere ike ịhọrọ gaa na saịtị WordPress dị na Pantheon. Ngwa Mbugharị na-ejegharị gị site na ntinye nke ngwa mgbakwunye na saịtị gị dị ugbu a, mgbe ahụ ịfefe na saịtị sandbox na Pantheon na-eme na akpaghị aka.
Kedu ụzọ ọ bụla ị nwere ike ịnwale ikpo okwu ngwa ngwa na ngwa ngwa, ma ọ bụ jiri saịtị WordPress ọhụrụ ma ọ bụ otu n'ime saịtị gị dị adị n'efu. Na Pantheon quickstart ndu nwere usoro zuru ezu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga saịtị n'ụzọ niile.
Na-arụ ọrụ na Pantheon
Mgbe inwere saịtị WordPress na Pantheon ị nwere nhọrọ abụọ maka ịrụ ọrụ. Usoro mbụ, nke kachasị mfe, bụ iji dezie saịtị WordPress gị na Pantheon. Gbanwee gburugburu, tinye mgbakwunye ọhụrụ ma ọ bụ dezie faịlụ na SFTP na git. N'agbanyeghị otu ị si arụ ọrụ mgbanwe niile esoro na njikwa njikwa. Iji faịlụ na nchekwa data na-elekọta ọdịnaya gị yana ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị.
Otherzọ ọzọ maka ịrụ ọrụ na WordPress na Pantheon dị mgbagwoju anya kamakwa ọ na-agbanwe ma dị ike, na-emegharị n'ụzọ ị masịrị ịrụ ọrụ. Ihe pụtara inyere ndị mmepe aka imeziwanye usoro ọrụ ha ma jikọta ya na ọrụ ndị ọzọ.
Ngwa ike dika Nkwụsị jikwaa Pantheon na iwu ma ọ bụ Quicksilver iji mejuputa nko ikpo okwu n'elu ikpo okwu. Anyị nwekwara usoro atụ dị elu, dịka na Terminus ewu ngwaọrụ ngwa mgbakwunye na Advanced WordPress na Pantheon.
Gaa thgha ma Mee Egwu!
Pantheon na-enye oke ikpo okwu nnabata yana ngwaọrụ iji nyere aka jikwaa saịtị WordPress gị ma debe ya na ọ kacha mma. O nweere onwe gị ịnwale ma gaa n’ihu ma kpee onwe gị ikpe.
Debanye maka Akaụntụ Pantheon
Tags: developmentmbaakwagide WordPressarụsịakwụkwọ ntinye akwụkwọwordpress Mbugharị
N'aka ekpe: Mepụta, Họrọ, Mee ọ rụọ ọrụ, ma tụọ ndị na-emetụta Instagram